10-ka Khabiir Ee Suuqgeynta Bulshada Ugu Sareeya Oo La Rabo | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/10-ka Khabiir ee ugu Sareeya Suuqgeynta Baraha Bulshada ee La Raacdo
10-ka Khabiir ee ugu Sareeya Suuqgeynta Baraha Bulshada ee La Raacdo
Ma rabtaa inaad wax badan ka barato suuq-geynta warbaahinta bulshada?
Mise waxaad raadinaysaa wax yar?
Waxaa jira suuqgeynyaal badan oo xariif ah, saameyn leh, oo waxtar leh oo wadaaga fikrado iyo tilmaamo qiimo leh.
Waxa soo socda waa liiskayga lagu taliyay ee 10 khubarada suuq-geynta warbaahinta bulshada waa inaad raacdaa.
Saamaynta Suuqgeynta Baraha Bulshada Ugu Sarreysa
Mark Schaefer waa cod aad caan uga ah suuq-geynta. Isagu waa qoraa iyo hadal-yaqaan, iyo buugiisii ​​ugu dambeeyay ee "Kacdoonka Suuqgeynta: Shirkadda ugu badan ee bini'aadamka ayaa ku guuleysata" ayaa bedelay habka khubarada suuqgeynta badani u wajahaan shaqadooda.
Waxa uu wax ka qoraa muhiimada cilaaqaadka iyo dareenka lahaanshaha ee suuqgeynta u leexashada cilmi nafsiga iyo xitaa cilmiga bulshada oo saldhig u ah falanqaynta suuqgeynta warbaahinta bulshada iyo saadaalintiisa.
Halkee la raacayaa: Raac Schaefer on Twitter si aad uga qaybgasho wadahadal qoto dheer oo ku saabsan xaaladda suuq-geynta warbaahinta bulshada oo akhri boggiisa si aad u aragto aragtiyo indho-furan.
Qaybta aan jeclahay: Waxaa jiray wax badan oo laga dooran karo, laakiin boggan blog-ka ah ee ku saabsan qiimaha ganacsiga ee ka-qaybgalka warbaahinta bulshada ayaa ii ahaa guuleyste. Tus madaxaaga marka xigta ay ku weydiiyaan waxa dhabta ah ee aad samaynayso.
Niche: Ganacsiga warbaahinta bulshada, adeegga macaamiisha bulshada.
Qoraaga taxanaha buuga caanka ah ee suuqgeynta "for dummies", Marsha Collier waa guru ee ganacsiga ecommerce iyo adeegga macaamiisha.
Waxay ku bari kartaa sida loogu iibiyo baraha bulshada, sida loo xalliyo arrimaha macaamiishaada iyada oo loo marayo Twitter iyo Facebook, waxayna kuu cusbooneysiin doontaa isbeddellada ugu kulul ee teknoolojiyadda inta lagu jiro jidka.
Waxay ka soo muuqatay "The View" iyo "Maanta" Show, waxaa loo magacaabay mid ka mid ah labaatanka qof ee ugu sarreeya iCitizens by Kelly Mooney buuggeeda, "The Open Brand".
Halkee la raacayaa: Waxaad ku qabsan kartaa Twitter oo ku biir #custserv chat. Si aad wax badan uga ogaato wararka ka imanaya Silicon Valley iyo wixii ka dambeeya, raac #techradio on Periscope.
Qaybta aan jeclahay: Dhacdadan #techradio oo ay kaga hadlayso awooda "cajiibka ah" ee Facebook si uu kuugu tuso xayaysiinta shay aad hada sheegtay runtii waa mid wanaagsan.
Ma u baahan tahay gacan si aad u horumariso istiraatijiyaddaada Facebook?
Boqoradda Facebook waxay halkan u joogtaa inay ku caawiso!
Mari Smith waa khabiir la yaab leh wax walba oo Facebook ah in shabakada warbaahinta bulshada ay dhab ahaantii u shaqaaleysiisey si ay u barato siminaaro iyada oo qayb ka ah kor u qaadida ganacsigaaga rasmiga ah ee dhacdooyinka tababarka tooska ah ee Maraykanka.
Smith waa ka qofka inuu raaco si uu u barto waxa ka dhacaya goobta, dhaqamada casriga ah ee ugu wanaagsan, iyo jabsiga korriinka.
Iyadu waa Saamaynta ugu Sarreysa ee Warbaahinta Bulshada ee Forbes, qoraaga "Suuqgeynta Xiriirka Cusub" iyo qoraaga "Suuqgeynta Facebook: Maalin Saacad ah."
Halkee la raacayaa: Hagaag, jawaabtu waa iska caddahay! Boggeeda Facebook-ga waa dahab dhab ah. Ka sokow, waxaa jira laba kooxood oo Facebook ah oo laga yaabo inaad rabto inaad ku biirto: si aad wax badan uga ogaato Xayeysiiska Hogaaminta iyo kooxda hormuudka u ah ganacsatada.
Qaybta aan jeclahay: Boostada baloogga "oldie-but-goodie" ayaa ku bari doonta waxa ma in lagu sameeyo baraha bulshada.
Niche: jabsiga kobaca warbaahinta bulshada, aaladaha warbaahinta bulshada.
Mike Allton waa blogger warbaahinta bulshada iyo wacdiyaiyaha caanka ah ee Agorapulse.
Isagu waa aasaasaha barta Koofiyadaha Bulshada iyo Blogging Brute blog, halkaas oo uu wax ka qoro isbeddellada warbaahinta bulshada ee cusub, farsamooyinka, iyo jabsiga kobaca.
Goobihiisa, wuxuu kula wadaagaa talooyinka ku saabsan blogging, suuq-geynta waxyaabaha ku jira, iyo suuq-geynta warbaahinta bulshada.
Wargeysyadiisa waxay u qalmaan in la xiro - shaqsi ahaan waan necbahay wargeysyada, laakiin iimaylkiisu waa xarfo dhab ah oo uu kula wadaago sheekooyinka noloshiisa oo si habsami leh u gala talooyinka istiraatiijiyada warbaahinta bulshada.
Halkee laga raacaa: Allton's Twitter wuxuu ku fiican yahay la socoshada wararkii ugu dambeeyay iyo wararka. U fiirso barta Koofiyadaha Warbaahinta Bulshada ee talooyinka istiraatiijiyada warbaahinta bulshada iyo dib u eegista aaladaha!
Qaybta aan jeclahay: Waxaa jira fikrado badan oo cajiib ah oo aan ka bartay Allton, laakiin waxaan haystaa meel jilicsan oo lagu qaso dhaqanka pop-ka oo leh talooyin qiimo leh, sidaas darteed "Star Wars" oo ah barta blog-ka ee mabda'a ugu fiican ee suuq-geynta warbaahinta bulshada ayaa ku guuleystay qalbigeyga.
Niche: Suuqgeynta Twitter-ka.
Tani waa qofka aan had iyo jeer ku faraxsanahay inaan ku arko waqtigayga Twitter-ka nasiib wanaag, tani waa meesha ay ugu firfircoon tahay!
Madalyn Sklar waa xiddig dhab ah oo Twitter ah ma aha oo kaliya sababtoo ah iyadu waa qofka ugu fiican ee loo jeesto marka ay timaado suuq-geynta Twitter-ka laakiin sidoo kale sababtoo ah tattooskeeda waxay dhab ahaantii u egtahay mid.
Waxay ku jirtay warbaahinta bulshada xitaa ka hor intaanay jirin wax sidan oo kale ah: 90-meeyadii waxay noqotay mid ka mid ah aasaasayaasha golaha fannaaniinta dumarka ah ee loo yaqaan GoGirlsMusic, taas oo loo tixgelin karo isku day hore ee shabakada warbaahinta bulshada ee niche.
Waxay sii waday inay noqoto khabiir suuq geynta warbaahinta bulshada oo maamusha dhowr sheeko oo Twitter ah oo ka hadasha dhacdooyinka adduunka.
Halkee laga raacaa: Mar kale, su'aashani waxay halkan u muuqataa mid aan caadi ahayn laakiin waa fursad weyn oo aan kaaga sheegi karo sheekeysiga Twitter-ka Sklar! #TwitterSmarter waxaa loogu talagalay kuwa doonaya inay kor u qaadaan xirfadahooda Twitter-ka, iyo #SocialRoi ayaa ku caawin doona guud ahaan. Haddii aad ka badan tahay bartayaasha maqalka ah, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad hubiso #TwitterSmarter podcast!
gabal aan jeclahayDhacdadan podcast-ka ah ee ku saabsan mustaqbalka cabbirada wax-soo-saarka ayaa kaa caawin doona inaad fahamto halka ay Twitter iyo warbaahinta bulshada, guud ahaan, ku wajahan yihiin.
Niche: Wararka baraha bulshada.
Maskaxdayda, Wong iyo Matt Navarra waa shakhsiyaadka ugu muhiimsan adduunka wararka warbaahinta bulshada (sidoo kale waxaa ku biiray Josh Costine oo caan ka ah TechCrunch).
Navarra waa lataliye iyo falanqeeye mihnadda warbaahinta bulshada oo leh aragti cusub oo miyir qabta oo ku saabsan isbeddellada warbaahinta bulshada.
Isagu sidoo kale waa aasaasaha iyo maamulaha kooxda The Social Media Geek Out Facebook oo ka kooban 13,000+ xubnood.
2019, waxa uu bilaabay podcast halkaas oo uu ku wareysto tirooyinka warbaahinta bulshada ee muhiimka ah sida hal-abuuraha hashtags iyo maamulaha Pinterest ee suuqgeynta Ganacsiga Caalamiga ah.
Halkee la raacayaa: Twitterkiisa waa meesha aad ka baran karto cusboonaysiinta warbaahinta bulshada ee ugu dambeysay, laakiin isha dhabta ah ee macluumaadka qiimaha leh iyo isku xirka xiisaha leh waa Kooxda Geek Out ee Warbaahinta Bulshada. Tani waa meesha aan ugu jecelahay inaan ka baxo oo aan ku weydiiyo su'aalo nacasnimo ah oo ku saabsan suuq-geynta warbaahinta bulshada!
Qaybta aan jeclahay: Dhacdadii ugu horreysay ee Podcast-ka Geekout halkaas oo Navarra uu kula hadlayo Agaasimaha Maareynta Alaabada ee Twitter-ka ayaa muujinaya tilmaamaha Twitter-ka laga yaabo inay qaadato dhowrka sano ee soo socda.
Niche: Wararka warbaahinta bulshada, daahfurka astaamo cusub.
Haddii aad ka shaqeyso warbaahinta bulshada, macquul maaha inaadan maqlin magaca Jane Manchun Wong. Iyadu waa boqorad injineero ah oo ka danbeysa inta badan xog-ururinta ku saabsan sifooyinka warbaahinta bulshada ee soo socda.
Haddii aad rabto inaad ogaato waxa soo socda shaandhada weyn ee Instagram waxay noqon doontaa, waxa Facebook dib u qaabayn doonaa, iyo astaamaha ay LinkedIn ku soo kordhinayso xiga, iyadu waa ta la raacayo.
Halkee la raacayaa: Wong waxay la wadaagtaa dhammaan natiijooyinkeeda Twitter-ka (oo dib u soo gelisa mar haddii si rasmi ah loogu dhawaaqo tiro-koob sassy ah oo ku dhawaaqaysa inta wakhti ka hor ay heshay). Waxa kale oo ay leedahay baloog halkaas oo ay kula wadaagto cusboonaysiinta ugu muhiimsan.
Qaybta aan jeclahay: Aad bay u adag tahay in la sheego daahfurka aan jeclahay, marka waxaan doortay akoonkeeda Twitter oo dhan. Faa'iido dheeraad ah, Wong waa qosol kamana baqayso in ay hadasho, marka la arko tweets-keeda weligeed caajis ma yeelanayso.
Niche: Istaraatiijiyada warbaahinta bulshada, jabsiga kobaca warbaahinta bulshada, maamulka warbaahinta bulshada.
Rachel Pedersen waxaa lagu dhiirigaliyay inay bilawdo la wadaagida khibradeeda suuqgeynta warbaahinta bulshada shaqadeeda.
Waxay ka tagtay shaqo 9-ilaa-5 ah si ay u noqoto suuq gaynta warbaahinta bulshada oo madax-banaan waxayna runtii rajaynaysay inay hesho bulsho waxtar leh markay bilawday.
Taasi waa sababta, mar ay heshay khibrad, waxay go'aansatay inay u abuurto bulshadan bilawga suuq-geynta warbaahinta bulshada.
Qoraalkeedu waxa uu si aad ah faa'iido ugu yeelan doonaa kuwa iskood u shaqeysta ama kuwa ka fekeraya inay noqdaan madax-bannaani - waxay la wadaagtaa talooyin ku saabsan sida loo helo macaamiisha ugu horreeya, habaynta maalintaada shaqada, gorgortanka qandaraasyada, iyo wax ka badan.
Halkee laga raacaaKooxda Facebook ee Pedersen waa meesha aan ka helo qiimaha ugu badan: halkan waxaad ka baran kartaa suuq-geynta warbaahinta bulshada waxaadna ka caawin kartaa suuqgeynyada kale.
Qaybta aan jeclahay: Waxa aan aad u jeclahay waa casharrada muuqaalka ah ee ay Facebook-ga ku wadaagto. Waa kan mid ku saabsan maareynta TikTok - haddii aadan weli isku dayin, waxaad rabi doontaa inaad ka bacdo muuqaalkan.
NicheQalabka warbaahinta bulshada, istaraatiijiyada warbaahinta bulshada, suuqgeynta nuxurka.
Ian Cleary waa aasaasaha RazorSocial, oo siinaya talo suuq geyn dhijitaal ah shirkadaha B2B. Waa khabiir ku takhasusay warbaahinta bulshada iyo khudbadaha muhiimka ah ee munaasabado badan oo caalami ah.
Maxaa kala sooca Cleary waa asalkiisii ​​​​farsamada: xirfaddiisu waxay ka bilaabatay tignoolajiyada sidaa darteed aaladaha warbaahinta bulshada ayaa ah diiradda ugu weyn ee xiisaha.
Halkee laga raacaa: Cleary's LinkedIn waa meesha ugu fiican ee lagula socon karo qoraalkiisa iyo fikradaha warbaahinta bulshada. RazorSocial's blog waa meesha ay tahay inaad u tagto qalabka suuq-geynta warbaahinta bulshada - waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee lagu barto faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka qalabka aad tixgelinayso!
Qaybta aan jeclahay: Mararka qaarkood maamulayaasha warbaahinta bulshada, gaar ahaan kuwa hadda bilaabaya, ayaan ka warqabin dhinaca farsamada ee suuq-geynta warbaahinta bulshada. Boostada blog-gu waa rundown wanaagsan oo iyaga ka mid ah u sharxayaa dhinaca farsamada ee warbaahinta bulshada si cad.
Niche: Falanqaynta xogta bulshada, saameeyayaasha warbaahinta bulshada.
Inta badan waxaad ogaan doontaan Rand Fishkin inuu yahay aasaasihii Moz, qalab SEO ah.
Inkastoo uu wali la wadaago ra'yigiisa ku saabsan SEO, waa warbaahinta bulshada iyo fikradaha suuq-geynta dhijitaalka ah ee aan aad u xiiseynayo.
Waxa uu aad uga hadlaa hababka gaaban iyo fikradaha khaldan ee aan ka samayno suuq-geynta warbaahinta bulshada iyo isticmaalka xogta bulshada - taas oo dhab ahaantii ah koob shaaha.
Fishkin waxa kale oo uu wax ka qorayaa nolosha xirfadlayaasha casriga ah ee suuqa suuq-geynta dhijitaalka ah: isku xirka, ka shaqaynta bilawga, sinnaanta farsamada, iyo wixii la mid ah.
Halkee laga raacaaFiiri Sparktoro's blog si aad u akhrido si qoto dheer oo uu u qaato suuqgeynta iyo falanqaynta xogta bulshada iyo Fishkin's Twitter si uu u raaco fikradihiisa ku saabsan warshadaha.
gabal aan jeclahay: Bandhigan ku saabsan waayaha soo socda ee suuqgeyntu waxay runtii wax ka bedeshay aragtidayda qiimaha suuqgeyneed ee warbaahinta bulshada (waxayna wax iga bartay qaybaha kale ee suuqgeyntu sidoo kale).
Waan ogahay. Liiskani waa shakhsi.
Waxaa laga yaabaa inaadan ku raaci doonin dhammaan xulashooyinkayga - laakiin kuwani waa dhammaan dadka wax bara, dhiirigeliya, oo i maaweeliya.
Waxaan rajeyneynaa, inaad liiskayga ka heshay qof kaa caawin doona inuu sidaas oo kale kuu sameeyo - oo noqda suuqgeyn ka wanaagsan habka.
Waxaana laga yaabaa in maalin uun aad soo baxdo liis la mid ah!
Sida Loo Maamulo Warbaahinta Bulshada: Hagaha Istaraatiijiyada Dhamaystiran
Isbeddellada Warbaahinta Bulshada ee Ugu Weyn 2020, Sida laga soo xigtay khubarada 34
Sababaha 7 Suuqgeeyayaasha & Faa'iidooyinka SEO waa inay u adeegsadaan warbaahinta bulshada goobta shaqada
Dhammaan shaashadaha uu qaaday qoraaga, Diseembar 2019
Sida Loo Isticmaalo Goobista Lacagaha Ah & Xayeysiiska Bulshada Kor U Qaadista Dhacdooyinka
Sida loo joojiyo hawl-qabadka badan ee iPad-kaaga